समाचार निर्माता: २०७४ - समसामयिक - नेपाल
वाम विजयका सारथि
पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’–अध्यक्ष, माओवादी केन्द्र
२० वर्षदेखि स्थानीय चुनाव नहुनुका कारणमध्ये एक थियो, विद्रोही माओवादी । उही माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफ्नो नेतृत्वमा ३१ वैशाख ०७४ मा स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचन गराए । अझ रोचक, एकै वर्षमा प्रचण्ड दुई भिन्न गठबन्धनमा सहभागी भए । स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसदेखि राप्रपासँग समेत प्रचण्डले सहकार्य गरे । माओवादीका पक्षमा सोचेजस्तो माहोल नबने पनि भरतपुरमा उनले छोरी रेणु दाहाललाई पुन: चुनाव गराएर भए पनि ‘जिताइछाडे’ ।
संघ र प्रदेश चुनावसम्म आइपुग्दा प्रचण्डले एमालेसँग गठबन्धन गरे । यो गठबन्धन दुवै दलका लागि फलिफाप भयो । वाम गठबन्धनका लागि प्रचण्ड तयार नहुादा सत्ता–समीकरण अहिलेको जस्तो सायद नहुन पनि सक्थ्यो । प्रचण्डको परिवारका हकमा भने यो वर्ष शुभ र अशुभ दुवै रह्यो । एक मात्र छोरा प्रकाशको ३ मंसिरमा निधन भयो । छोरी रेणु मेयर र बुहारी बिना मगर खानेपानीमन्त्री भए । चितवनजस्तो विरोधी किल्लामा उनी ठूलै मतान्तरले विजयी भए ।
शेरबहादुर देउवा–सभापति, नेपाली कांग्रेस
२३ जेठ ०७४ मा चौथोपटक प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवाको यो कार्यकाल झनै विवादित रह्यो । तेस्रो वरीयताका एआईजी जयबहादुर चन्दलाई आईजीपी बनाउन गरेको जबर्जस्ती, विवादास्पद व्यक्तिलाई कांग्रेसको कोटाबाट राजदूत बनाउन गरेको सिफारिस अनि सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई महाभियोग लगाउने निर्णय देउवा र कांग्रेस दुवैका लागि महाघातक ठहरिए । त्यस्तै, राज्यको ढुकुटी रित्याउने गरी उनको सरकारले वितरण गरेको जथाभावी आर्थिक सहायता सार्वजनिक लज्जाकै विषय बन्यो । परिणामत: कांग्रेसले स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय चुनावमा अहिलेसम्मकै लज्जाजनक हार बेहोर्नुपर्‍यो । देउवाकै कृत्यले सातवटै प्रदेश सरकार कांग्रेसविहीन भए भने प्रतिनिधिसभामा ६२ सिटमा सीमित हुन पुग्यो । तैपनि, ७१ वर्षे देउवा गलेका छैनन् । पार्टीभित्रको रस्साकसीबीचमै देउवा फेरि संसदीय दलको नेता चुनिएका छन् । र, मौका परे फेरि प्रधानमन्त्री हुने पर्खाइमा छन् ।
राजधानीमुखी र महँगो हुँदै गएको स्वास्थ्य शिक्षामा सामयिक सुधारका निम्ति आमरण अनशनको अस्त्र उपयोग गरिरहेका छन्, डा गोविन्द केसी । पाँच वर्षयता यी सनकी डाक्टरको सत्याग्रह शृंखला चौधौँपटक चलिसक्यो । यस वर्ष अदालतको अवहेलना अभियोगमा उनी अनशनस्थलबाटै पक्राउ परे ।
सर्वोच्च अदालतद्वारा चार वर्षअघि बर्खास्त चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम)का डीन शशि शर्मालाई पुन:बहाली आदेश दिएपछि डा केसीले प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको राजीनामा मागसहित अनशन मात्र थालेनन्, पराजुलीलाई न्याय किनबेचको नाइके करार गरिदिए । र, व्यापक जनदबाबपछि साधारण तारेखमा रिहा भए ।
पेसाले हाडजोर्नी सर्जन भए पनि सिंगो समाजकै सर्जनका रुपमा चिनिन्छन् केसी । सरकारसँग भएका पटके सम्झौता कार्यान्वयन नभएपछि कहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख लोकमानसिंह कार्की, कहिले प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली त कहिले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति तीर्थ खनियाँविरुद्ध ‘गोविन्दगिरी’ चलिरह्यो ।
उनकै कारण चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसद्मा विचाराधीन छ भने सातै प्रदेशमा मेडिकल कलेज खुल्ने क्रममा छन् । बेथिति र अव्यवस्थाले घायल नेपाली जनमानसमा गान्धीछाप सत्याग्रह आशाको एउटा दियो हो ।
सर्वोच्च नामी र बदनामी
सुशीला कार्की र गोपालप्रसाद पराजुली–पूर्वप्रधानन्यायाधीश
नेपालको न्यायिक इतिहासमा सम्झनायोग्य र भुल्नैपर्ने विपरीत पात्र बने, सुशीला कार्की र गोपालप्रसाद पराजुली । आईजीपी नियुक्ति प्रकरणमा प्रधानन्यायाधीशबाट अवकाशसम्मुख रहेकी कार्कीले १७ वैशाखमा व्यवस्थापिका संसद्को महाभियोग प्रस्ताव खेप्नुपर्‍यो, जुन नेपालको इतिहासमै पहिलो घटना थियो । अन्तत: सर्वोच्चले महाभियोग यथास्थितिमा राख्न र प्रधानन्यायाधीशलाई काममा फर्कन आदेश दियो । र, कार्कीको स्वाभाविक अवकाश भयो ।
त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश बनेका पराजुलीले आफ्नो कार्यकाल लम्ब्याउन सबैभन्दा पछिल्लो जन्ममिति कायम गराए, न्यायपरिषद्बाट । पराजुलीको नेतृत्वकालमा न्यायालय विवादको धुरीमा पुग्यो । उनले न्यायालयलाई स्वेच्छाचारी र पूर्वाग्रह साँध्ने थलो बनाए । गोविन्द केसी र कान्तिपुर दैनिकविरुद्धको अदालतको मानहानि मुद्दा पूर्वाग्रहप्रेरित थिए । अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीलाई ज्यान मार्ने धम्की दिए । अनुभव र वरिष्ठतालाई पन्छाएर भान्जीज्वाइँ नहकुल सुवेदीलाई मुख्य रजिस्ट्रार मात्रै होइन, उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश नै बनाए ।
अन्तरिम आदेशकै भरमा राज्यकोषमा जम्मा हुनुपर्ने ६१ अर्ब रुपियाँ गुम्यो, उनको कार्यकालमा । राजस्व छली, तस्करी, भ्रष्टाचार, क्यासिनो सञ्चालनजस्ता वजनदार मुद्दा आपैँm वा आफू अनुकूलको बेन्चमा तोके । सर्वाधिक विवादित पराजुली अन्तत: जन्ममिति विवादबाटै लज्जास्पद बहिर्गमनमा परे । ३० फागुनमा न्यायपरिषद् सचिव नृपध्वज निरौलाले २१ साउनमै पदमुक्त भएको पत्र पठाएपछि प्रधानन्यायाधीश फर्जी दरिए । यस्तै कृत्यले पराजुली बहिर्गमनपछि समेत सम्मानित र आस्थावान् न्यायमूर्तिमा दरिएनन् ।
श्रीजंग राणा र रुद्रकुमारी राणा–दानी दम्पती
२५ वर्षअघि फत्तेजङ शाहले धर्मपत्नी बालदिव्येश्वरी शाहको सम्झनामा करोडौँ मूल्यको जग्गा दान गरे । र, नेपालगन्जमा फत्तेबाल आँखा अस्पताल खुल्यो । २ फागुन ०७४ मा फत्ते जङका छोरा–बुहारी श्रीजंग राणा, ९४, र रुद्रकुमारी राणा, ९०, ले सोही आँखा अस्पताललाई एक अर्ब रुपियाँ बराबरको जग्गा उपलब्ध गराए । यो दम्पती काठमाडौँको मुटु कान्तिपथमा रहे को ३ रोपनी ३ आना २ पैसा २ दाम जग्गा दान गरेपछि चर्चाको केन्द्रमा रह्यो ।
त्यसो त शाह दम्पतीले आफ्नै सम्पत्ति दान गर्न प्रशासनिक र पारिवारिक सास्ती झेल्नुपर्‍यो । छोरी ईश्वरी र ाणा र ज्वाइँ रुक्मशमशेरले हकदाबी गरेपछि मुद्दा–मामिला भयो । अन्त्यमा शाह दम्पतीकै पक्षमा फैसला आयो र जीवनको उत्तराद्र्धमा यतिविघ्न सम्पत्ति अस्पताललाई सुम्पे । सोही कारण यो जोडी यस वर्ष मात्र होइन, दीर्घकालसम्म प्रेरणा र प्रशंसाको स्रोत बन्नेछ ।
घोटालाका दुई सारथि
गोपालबहादुर खड्का र चूडामणि शर्मा–कर्मचारी
घोटालाका पर्यायवाचीसरह भए, गोपालबहादुर खड्का र चूडामणि शर्मा । संयोग यी दुवै पात्र वर्षको सुरुमै अनियमिततामा मुछिए ।
कार्यकारी निर्देशक हुनासाथै अनियमितता शृंखलामा जोडिएका खड्का नेपाल आयल निगमको पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण स्थल बनाउन करिब डेढ अर्ब रुपियाँ बराबरको ९० बिघा जग्गा किन्दा ६७ करोड रुपियाँ अपचलन गरेको आरोप खेपिरहेका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको छानबिनमा समेत छन् । सार्वजनिक खरिद ऐन र जग्गा प्राप्ति ऐनका प्रावधान छलेर चलनचल्तीको भाउभन्दा ३० गुणा बढीसम्म तिरेर जग्गा किनियो । यसअघिका विवादमा शक्तिकेन्द्रसँगको गठजोडका कारण जोगिँदै आए पनि जग्गा घोटाला काण्डबाट भने बचेनन् । २ असोजमा बर्खास्तीमा परे । तर, सर्वोच्च अदालतले २२ असोजमा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै नहटाउन भन्यो । त्यसयता आपूर्ति मन्त्रालयमा हाजिर गरिरहेका छन् ।
शर्मा सदस्य–सचिव रहेको कर फस्र्योट आयोगले करिब ३१ अर्ब रुपियाँ कर निर्धारण गर्दा व्यवसायीमैत्री निर्णय गरेर अनियमितता गरेको आरोपमा अख्तियारको हिरासतमा पुगे, १९ जेठ ०७३ मा । साढे १० अर्ब रुपियाँ अनियमितता काण्डमा शर्माबाट साढे तीन अर्ब बिगो भराउने अभियोग थियो । सम्भवत: यो सबैभन्दा ठूलो भ्रष्टाचार काण्ड हो । निजी कम्पनीलाई भारी कर मिनाह गर्दा राज्यकोषमा आउने रकम त गुम्यो नै, कतिपय कम्पनीले कर फिर्तासमेत लगे । राज्यकोष रित्याउने निर्णयकर्ता शर्मा १२ मंसिरमा विशेष अदालतको आदेशबाट एक करोड रुपियाँ धरौटीमा छुटे ।
दुर्गाबहादुर राना, जसले मतदान केन्द्रमा प्रहार गरिएको बम हातले समाएर फ्याँकेपछि चर्चामा रहे । उनले सम्भावित दुर्घटनाबाट सर्वसाधारणलाई जोगाए । १४ असार ०७४ मा दाङको तुलसीपुर उप–महानगरपालिका–३, अम्बासस्थित विद्यालयमा रहेको मतदान केन्द्रमा स्थानीय तह दोस्रो चरणको निर्वाचन हुँदै थियो । मतदाता लाइनमा थिए । त्यही बेला अज्ञात समूहले मतदान स्थलमा बम प्रहार गर्‍यो । विस्फोट भई क्षति पुग्नुअघि नै प्रहरी हबल्दार रानाले समातेर फ्याँकेको बम खेतमा विस्फोट भयो । जसका कारण सम्भावित ठूलो दुर्घटना टर्‍यो ।
तत्कालीन गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले रानालाई भेटेर बहादुरीको प्रशंसा गरे । मन्त्रालयले एक तह पदोन्नतिसहित पुरस्कृत गर्‍यो । स्वदेश तथा विदेशमा रहेका पूर्वप्रहरी संगठनले समेत उनको बहादुरीको उच्च प्रशंसा गर्दै सम्मान गरे ।
काठमाडौँमै जन्मे–हुर्केका विनोद शाहीले डोल्पाको यांगर गुम्बा प्राथमिक विद्यालयमा पढाउन थालेको डेढ दशक बित्न लाग्यो । स्वयंसेवी शिक्षकका रुपमा दुर्गम भेगमा शिक्षाको ज्योति छर्न लागिपरेका विनोद यस वर्ष एकाएक चर्चामा आए । कारण, उनी विश्वका उत्कृष्ट ४० शिक्षकमा परे । प्रतिष्ठित भार्गी फाउन्डेसनको सूचीमा पर्ने विनोद पहिलो नेपाली हुन् ।
एसएलसीपछि फाइन आर्ट पढिरहेका बेला बौद्धमा डोल्पाबाट आएका विद्यार्थीसँग विनोदको भेट भयो । उनीहरुकै साथमा विनोद डोल्पा पुगे । शिक्षक र चेतना अभावका कारण डोल्पाका विद्यालय बन्द थिए । उनी गएपछि यांकर गुम्बा र दशरथ चन्द प्रावि पुन: सुचारु गरियो । यही कारण उनले ‘हिमालका शिक्षक’को उपमा पाएका छन् । डोल्पाको समग्र शैक्षिक विकासमा समर्पित विनोदको समन्वयमा जिल्लाका नौ विद्यालयका लागि १७ स्वयंसेवी शिक्षक काठमाडौँबाट जाँदै छन् ।
राष्ट्रिय क्रिकेट टिम र सन्दीप लामिछाने
जिम्बाबेमा भएको क्रिकेटको विश्वकप छनोटमा पपुवान्युगिनी नेपालसँग ६ विकेटले पराजित भयो । र, त्यसपछिको अर्को खेलमा हङकङ नेदरल्यान्ड्ससँग पराजित भएसँगै नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमले अस्थायी एकदिवसीय मान्यता प्राप्त गर्‍यो । नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हात पारेको अहिलेसम्मको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि यही हो ।
सन्दीप लामिछाने, १७, इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल) खेल्ने पहिलो नेपाली बनेका छन् । दिल्ली डेयर डेभिल्सले उनलाई २० लाख भारतीय रुपियाँमा आफ्नो टिममा अनुबन्धित गरेको छ । नेपाललाई एकदिवसीय मान्यता दिलाउन पनि सन्दीपको भूमिका महफ्वपूर्ण रह्यो । लेगब्रेक गुगली बलिङ सन्दीपको विशेषता हो । आईपीएलको छनोट चरणको खेलमा उनको बलिङबाट प्रभावित भएर दिल्ली डेयर डेभिल्सका प्रमुख प्रशिक्षक रिक्की पोन्टिङले टिममा राख्ने स्वीकृति दिएका हुन् ।
‘फोब्र्स एसिया’ले एसिया–प्यासिफिक क्षेत्रका लागि प्रकाशित गरेको ‘३० मुनिका ३०’ सूचीमा नेपालकी आयुषी केसी, २८, पर्न सफल भइन् । नेपाललाई फोहोरमैलामुक्त बनाउन उनले सुरु गरेको सामाजिक व्यवसाय खाली सिसी डटकम सयौँ मानिसको आय आर्जनको स्रोत बनेको छ । हरेक महिनाको कुल आम्दानीबाट १० प्रतिशत फोहोर संकलकलाई दिइने गरेको छ ।
घरमा उत्पादन भएका फोहोर व्यवस्थापन तथा पुन:नवीकरण गर्नु यसको मुख्य उद्देश्य हो । अधिकांश फोहोर डम्पिङ साइट या नदीमा फाल्ने बानी बदल्नु छ आयुषीलाई । विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका कार्यक्रममा नेपालको प्रतिनिधित्व गरिसकेकी आयुषीको यो व्यवसाय ‘गुगल बिजनेस ग्रुप’ले आयोजना गरेको प्रभावकारी उद्यमहरुको प्रतियोगितामा विश्वभरका हजारौँलाई पछि पार्दै उत्कृष्ट ९ मा पर्न सफल भएको थियो ।
प्रकाशित: चैत्र २७, २०७४
स्थानीय सरकार : विकास नै बाँडेर खाने !
सिक्टामा दोषी को ?
महत्त्वाकांक्षा उच्च सरकार सुस्त
सरकारको १ वर्ष : औसत शासन शैली, कामचलाउ प्रवृत्ति
प्रतिजासुसी संयन्त्र : पराई प्रवृत्तिको सिकार
सरकार चलाउने कि कारखाना ?
भेनेजुएला वक्तव्य : प्रचण्डले बाँधेर दुखाएको टाउको
राष्ट्रसंघीय चाहनामा तुषारापात